Torohevitra ho an'ny hantsana hialana amin'ny hantsana
... Fa manohitra ny mianjera
Ny fanambanin'ny hetsika dia fanamby mazava, saingy mitsingevana ... mora izany. Right? Tsy izany foana. Ny tetezana malefaka dia mahafinaritra sy mora azo ahafahanao mankafy ny tontolo iainana - fa ny filalaovana lalina, na ny fiantsoana tsikelikely any amin'ny tany tsara indrindra aza, dia mitaky fifantohana tanteraka.
Torohevitra ho an'ny hantsana
Ireto misy sombim-pikatroko tena tiako indrindra amin'ny fandehanana any anaty ala na eny amin'ny hantsana mahery vaika. Ireo izay azonao dia miankina amin'ny fahaiza-manaonao, ny fahaiza-manao sy ny fampiononana, ary mazava ho azy eo amin'ny tehezanao izay ifaneraseranao.
Tadidio: Raha tsy azonao antoka fa afaka midina amim-pahasambarana ianao, mitadiava fomba mora kokoa - na tsy miakatra any amin'ny toerana voalohany!
Ny fomba tsotra indrindra hahasosotra anao rehefa mitsangatsongo dia tokony ho maika - tsy izany! Mialà fotoana betsaka hialana amin'ny alahelonao mialoha ny haizina, na dia mihodina aloha aza izany. (Saingy manana fotopampianarana ao amin'ny kitapo -nify ianao raha ny marina, sa tsy izany?)
Antenaina fa midina toy izany koa ianao, noho izany dia farafaharatsiny kely ny mahazatra ny toerana hodianao. Na izany aza, tandremo sao misy loza izay mety tsy ho hitanao eo amin'ny làlana - indrindra indrindra ny tsy fahampian-tsakafo na tsy azo hivalozana, indrindra raha any amin'ny toerana mety hisy fiantraikany ratsy.
Raha toa ka misy zava-miafina mba hikororohana haingana ny hantsana, dia mitazona ny lanjanao eo amin'ny toerana misy anao amin'ny fifandraisana amin'ny tany. (Tazony: Alao ny tongotrao matetika!)
Ny ambany dia ny ivon'ny fandanjalanjana (izany hoe ny mandohalika kokoa anao), ny mendri-piderana anao kokoa - ary ny mora kokoa dia ny mamela ny tenanao "hianjera" mafy, raha ilaina, toy ny ezaky ny lozisialy farany, mba hisorohana ny loha laharana voalohany downslope fall. (Saingy tsy hitranga izany satria mbola hamaky ny sisa amin'ireo torohevitra ireo ianao ary hampiasa fampitandremana mifanaraka amin'izany rehefa miala sasatra.
Ny fanaovana dingana kely dia mahatonga anao ho mora kokoa aminao ny mifantoka amin'ny tongotrao, ary mahatonga azy io ho mora kokoa amin'ny fahasitranana raha toa ka miala amin'ny lanjanao ianao. Ny fakana fepetra kely dia mahatsapa ho azo antoka kokoa noho ny mitsambikina havoana satria ... tsara ... izany!
Mora kokoa ny mitazona ny fifehezana rehefa hivezivezy ny fihodinana - izany hoe, zigging sy miparitaka manerana ny havoana, mitombo tsikelikely ny haavony amin'ny andalana tsirairay - toy ny baomba mandondom-barotra voalohany eo amin'ny hantsana mihetsiketsika. Ny ankamaroan'ny lalam-pandeham-barotra marevaka eny an-tsisin-dalana dia hanana fikorontanana natsangana tao amin'izy ireo.
Na dia tsy manana fihodinana kely aza ny lalan-kely iray, dia azonao atao ny manamboatra ny mini-switchbacks amin'ny alàlan'ny zig-zagging hatraiza hatraiza amin'ny sakan'ny lalana na ny soroka.
Indraindray ny famerenana amin'ny laoniny dia tsy safidy (na mbola mahatsiaro ho mafimafy kokoa / malaky ampy mba mitaky fampitandremana fanampiny). Amin'io tranga io, ny fivoahana amoron-dalana amin'ny lalana dia fomba tsara.
Rehefa manao izany aho dia manondro eny amin'ny làlana ny tongotro fa tsy mampihetsi-po azy fotsiny, ary mitazona ny lohaliko aho mba hahafahako mamantatra "pancake" eo amin'ny hantsana eo amboniko, fa tsy hidina midina, raha toa ka trotraka aho. Matetika aho no hikorontana kely dia afaka mampiasa ny tanako mba handanjalanja bebe kokoa.
( Fanamarihana: Ataovy azo antoka fa takatrao ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanatanjahantena amin'ny toerana mihetsiketsika, mihetsiketsika, manohitra ny fiezahana handroso ara-teknika.
Tohizo ny fifandraisana feno
Raha toa ka tsy safidy ny famerenan-doha (na raha tianao ny haka ilay fohy sy tsikelikely), azonao atao ny manandrana manamboatra ny tongotrao - amin'ny teny hafa, manondro ny tongotrao - rehefa midina midina. Tsy midika izany hoe mandehandeha eny an-tsorokao; Midika izany fa ny fihazonana ny tokotanin'ny kiraro rehetra mifandray amin'ny tany raha manondro ny havanao.
Afangaro ny tongotrao
Raha toa ianao milentika anaty ala marefo - matetika ny oram-panala na ny scree - manoloana anao ary manipy ny kiraronao any amin'ny hantsana rehefa midina dia afaka manome anao tsara kokoa ny footholds.
Raha mahatsapa ho tsy miangatra ianao na miahiahy momba ny latsaka "mivoaka" (midina), miezaha hiatrika.
Manao zavatra vitsivitsy izany:
Ho mora kokoa aminao ny hianjera any ambany, fa tsy hanalavitra azy io
Mora kokoa aminao ny maka ny tehaka mavesatra ho an'ny fifandanjana fanampiny
Mora kokoa aminao ny miankina amin'ny havoana, izay miankina amin'ny toe-javatra - mety hahatonga anao ho matoky bebe kokoa.
Eo am-piatrehana, mitodika any dia manjary sarotra ny mahita ny toerana hanohananao ny tongotra manaraka. Noho izany dia tsy izany foana no vahaolana tsara indrindra, fa tena fitaovana tsara tokoa ny mijanona ao an-tsaina.
Inona àry no ataonao raha tianao ny hampiasa ny tananao sy ny tongotrao mba hanampiana anao hidina ambany, fa mbola mila mahita ny toerana alehanao? Miondrika ianao na krabia-mandehandeha eny an-tananao sy eo an-tongotra na mipetraka eny am-pelatànanao rehefa mametraka ny tonganao ho amin'ny toerana manaraka ny dingana manaraka.
Manitatra ny taninao
Mitondra bala ve ianao? Afaka manampy be dia be izy ireo amin'ny fihazonana ny fandanjalanjanao amin'ny hantsana midadasika, na dia tsy tiako aza ny hamerenako ny lanjanao manontolo amin'izy ireo. Raha mitondra baoritra hikorontana ianao, dia azonao atao ny mampitombo azy ireo mba hahatonga ny vatanao hivoatra araka ny tokony ho izy rehefa midina ianao.
Ny fitaterana baoritra mandroso dia mety ho tompon'andraikitra, raha tsy mila ny tananao ianao, dia ataovy izay hahazoana antoka fa fantatrao ny fomba fametrahana ny bao anao raha tsy mila azy ianao .
Hikirakanana 101: Ahoana no hikolokoloana ny gripa?
Fomba 4 ahafahana mamela fonosana mankany amin'ny kitapom-batsy
Fomba ahoana no hahafatesana?
Ahoana no handehanana any amin'ny orana ary ankafizo izany?
Ahoana ny fomba hanandramana boots sy kiraro
Inona ny FAFSA?
Toro-hevitra momba ny trangam-piaramanidina, fialantsasatra ary indrindra
Ny fomba nahatonga ny tanàna tao amin'ny lavaky ny reniranon'ny Azteky
Ny Lalàm-panorenan'i Solon sy ny fiakaran'ny demokrasia
Fampiasa amin'ny teny frantsay amin'ny teny frantsay
Coretta Scott King Teny nalaina
Ireo 10 Saddest Rap Songs
Ahoana ny fampiasana ny teny frantsay hoe 'C'est la Vie'
Ahoana no ilazanao hoe 'voataona'?
Manatsara ny portfolio-nao
Ny dingam-panovàna an-tsary
Ny fifandraisana amin'i Etazonia amin'i Shina
Betting Systems Positive
Pirintan'i Bent ao Dahshur
Tokony Hahazo Safidy Sosialy ve Ianao?
Marc Blucas miresaka momba ny "zanakavavy voalohany"
Ianaro ny Fandikan-tenin'ny Baiboly amin'ny teny litorzika, ny "Kyrie"